Muridzi wepfuma wepfungwa | Eindhoven & Amsterdam
Intellectual Property (IP) Mutemo
KUKANGANIRA- & MIGRATION LAW
MERGERS & ZVINOKOSHA
KUSVIRA UYE KUKONESA KWEMWE ZVESANGANO ZVESANGANO
CHOKWADI CHIKAMU CHITEMO
PHARMA & ISAYSI HUPENYU
Kuti udzivise vamwe vanhu kushandisa basa rako, mutemo wepfuma wepfungwa unopa mukana wekudzivirira pfungwa dzako dzakagadziriswa uye pfungwa dzekugadzira. Izvi zvinoreva kuti zvisikwa zvako zvinogona kungoshandiswa nemvumo yako. Izvi zvakakosha zvakanyanya munharaunda yedu inokurumidza kuchinja uye ine hunyanzvi. Ungave uchida kuziva zvakawanda nezve mutemo wepfungwa wepfuma?
DZIVA ZVAKO ZVAKO
Mutemo wepfungwa wepfuma
Kuti udzivise vamwe vanhu kushandisa basa rako, mutemo wepfuma wepfungwa unopa mukana wekudzivirira pfungwa dzako dzakagadziriswa uye pfungwa dzekugadzira. Izvi zvinoreva kuti zvisikwa zvako zvinogona kungoshandiswa nemvumo yako. Izvi zvakakosha zvakanyanya munharaunda yedu inokurumidza kuchinja uye ine hunyanzvi.
> Ruzivo rwepfungwa
> Iyo akasiyana epfuma kodzero
Ungave uchida kuziva zvakawanda nezve mutemo wepfungwa wepfuma? Nyanzvi pa Law & More inogona kukupa iwe rubatsiro rwepamutemo kana uchida kuchengetedza mazano ako kana zvisikwa. Kana iwe ukabatana nesu, isu tinokubatsira iwe kunyoreswa kwepfungwa uye isu tichaita pachinzvimbo chako kupokana nevanobiridzira. Hunyanzvi hwedu mumunda wepfungwa yeuchenjeri mutemo ndewe:
• Patents uye patents;
• Kutengeserana mazita
Kubata Partner / Advocate
Ruzivo rwepfuma kodzero
Iwe uri muridzi webhuku here, firimu, mimhanzi, pendi, pikicha kana chirahwe? Wana musangano nesu
Iwe unoda here kunyoresa chigadzirwa chako kana sevhisi? Tinogona kukubatsira
Iwe uri muridzi wechigadzirwa here? Ronga patent
Tinokubatsira kunyoresa zita rako rekutengesa
matambudziko emutengi. "
Kana iwe uri mugadzikisi, gadzira, mushambadziri kana munyori, unogona kuchengetedza basa rako kuburikidza nehunyanzvi mutemo mutemo. Mutemo wepfungwa wepfungwa unovimbisa kuti vamwe vangasashandisa zvisikwa zvako kunze kwekunge uchipa mvumo yekudaro. Izvi zvinokupa iwe mukana wekuti uwanezve mari yako mukuvandudza kwechigadzirwa. Kuti uwane kuchengetedzwa, zvakakosha kuti iwe uve neruzivo rwakadzama. Pfungwa yega haina kukwana, sezvo inogona kuve yakagadzirirwa munzira dzinoverengeka. Paunenge uine zano rakagadziriswa, magweta edu anogona kunyora ako ehungwaru nenzira dzakasiyana. Kune mhando dzakasiyana dzemutemo wepfuma wepfungwa, iyo inogona kushandiswa zvakasiyana kana musanganiswa.
Iyo akasiyana epfuma kodzero
Kune mhando dzakasiyana dzemitemo yeuchenjeri yezvivakwa, chimiro, huwandu uye urefu hwazvo zvinosiyana kubva kune imwe chivakwa kurudyi. Dzimwe nguva kodzero dzepfuma dzepfungwa dzakawanda dzinogona kunyoreswa panguva imwe chete. Law & More'hunyanzvi mumunda wemutemo wepfuma wepfungwa unosanganisira copyright, mutemo wekutengesa, mareti nemhare uye mazita ekutengesa. Nekusangana Law & More iwe unogona kubvunza nezvezvingabvira.
Copyright inodzivirira mabasa emusiki uye inopa muvaki kodzero yekuburitsa, kubereka uye nekudzivirira basa rake kubva mukushandiswa zvisakafanira nevechitatu mapato. Izwi rekuti 'basa' rinosanganisira mabhuku, mafirimu, mimhanzi, pendi, mifananidzo uye mifananidzo. Kunyangwe copyright ichikosha kuti inyorerwe, sezvo ichingoitika pachako kana basa rikagadzirwa, zvinokurudzirwa kuve nekodhi rakanyorwa. Kuti ugadzire iyo chaiyo, iwe unogona nguva dzose kuratidza kuti basa raivapo pane imwe zuva. Ungave unoda kunyoresa copyright yako uye kuchengetedza basa rako kuvanhu vanokanganisa copyright yako? Ndokumbirawo mubate magweta ku Law & More.
Mutemo wekutengesa unoita kuti zvive nyore kunyoresa chiratidzo chako, kuti pasave neanogona kushandisa zita rako pasina mvumo yako. Kodhi yekutengesa inosimbiswa chete kana iwe uchinyoresa chiratidzo mune yevatengesi chiratidzo. Law & More'magweta achafara kukubatsira neizvi. Kana yako trademark yakanyoreswa uye yakashandiswa pasina mvumo yako, ichi chiratidzo chekutengesa chiratidzo. Wako Law & More Gweta richazokwanisa kukubatsira kuti utore matanho ekuzvidzivirira.
Patents uye patents
Kana iwe uchinge wagadzira chigadzirwa, technical chigadzirwa kana maitiro, unogona kunyorera patent. Patent iyi inovimbisa kuti une kodzero yekusarudza chako chigadzirwa, zvigadzirwa kana maitiro. Kuti unyore kukumbira patent, unofanirwa kuita zvina zvinodiwa.
• Inofanirwa kuve yekugadzira;
• Iyo yekutanga inofanirwa kuve nyowani;
• Panofanirwa kuva nedanho rekutora. Izvi zvinoreva kuti yako yekugadzira inofanirwa kuve itsva uye kwete kungovandudza diki pane chigadzirwa chiripo;
• Kugadzira kwako kunofanirwa kushandira zviripo.
Law & More inotarisa kuti unosangana nezvinodiwa zvese uye inokubatsira kunyorera patent.
Izita rekutengeserana izita rinoitwa nekambani. Iro zita rekutengesa rinogona kunge rakafanana nezita rechiratidzo, asi izvo hazviwanzo zvakadaro. Mazita ekutengeserana anogona kuchengetedzwa nekuvanyorera ivo neChamber of Commerce. Makwikwi haatenderwe kushandisa zita rako rekutengesa. Mazita ekutengeserana ayo anovhiringidza akafanana nezita rako rekutengeserana haabvumidzwe zvakare. Nekudaro, kuchengetedza uku kwakasungwa mudunhu. Makambani ari kune imwe nzvimbo anogona kushandisa zita rakafanana kana rimwe chete. Nekudaro, zita rekutengesa rinogona kupihwa dziviriro yakawedzerwa nekuzvinyoresa zvakare sechiratidzo. Magweta a Law & More ichafara kukupa zano pane izvo zvinogoneka.
Uri kutsvaga gweta repfuma? Ndokumbirawo mubate Law & More. Tinogona kukubatsira kumisa kodzero dzako uye nekukutsigira kana kodzero dzako dzikatyorwa.
mr. Tom Meevis, mumiriri pa Law & More – tom.meevis@lawandmore.nl
Mr. Maxim Hodak, mutsigiri pa & Zvimwe - maxim.hodak@lawandmore.nl